दुई महिना अगाडी मात्र बिहे गरेका डा. सुदिप अर्यालले आखिर किन चाले यस्तो कदम ? – Gandaki Chhadke
मा’नसिक अस्पताल पाटनका कन्सल्ट्यान्ट साइक्यास्ट्रिक डा. सुदिप अर्यालले वि’ष से’वन गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रमेश बस्नेतका अनुसार डा. अर्यालले वि’ष से’वनका कारण मृ’त्यु भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो।
उनी बूढानीलकण्ठस्थित एक होटलमा आइतबार मृ’त फेला परेका थिए। मृ’त्यु’को कारण प’त्ता लगाउनका लागि उनको पो’ष्ट’मा’र्ट’म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको छ। ‘हाम्रो प्रा’रम्भिक अनुसन्धानमा वि’ष से’व’न’बाट मृ’त्यु भएको देखिन्छ ।थप अध्ययन गरिहेका छौं।
पो’ष्ट’मा’र्ट’म’को रिपोर्ट बेलुकासम्म आइपुग्छ। अनि केही थप भन्न सकिएला,’ एसपी बस्नेतले भने। उनका अनुसार मृ’त’कको कोठामा वि’ष फेला परेको थियो। डा. अर्यालको तीन महिनाअघि मात्रै विवाह भएको थियो। बबरमहलमा घर भएका उनको परिवारमा बुवा, आमा र श्रीमती छन्।
भाइ र भाइबुहारीमा विदेशमा बस्दै आएका छन्। डा. अर्याल गत असोजमा नवौं तहमा ब’ढुवा भएर मा’न’सि’क अस्पतालमा पु’गेका थिए। क’न्स’ल्ट्या’न्ट सा’इक्या’स्ट्रिक’का पदमा कार्यरत डा. अर्याल अस्पतालमा शुक्रबारसम्म काम गरेर फ’र्किएका उनका सहकर्मी डा. वासुदेव कार्कीले जानकारी दिए।
‘सधैं हाँ’सी-म’जाक गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको सबैसँगै मि’लनसार व्य’वहार थियो। सँगै काम गरिरहँदा केही व्य’वहारमा फरक भएको अनुभूति पाएका थिएनौं। शुक्रबार पनि अस्पतालमा काम गरेर घर फ’र्किनु भएको थियो,’ डा. कार्कीले भने।